[Xasaasi] Xukumadda Soomaaliya Oo Hargeisa U Soo Magacawday Xubno Baasaboorkooda Ku Samaynaya Dalka, Xilli Dawladda Somaliland Mamnuucday
Wednesday 16th May 2018 11:36:18 in Wararkii Maanta by Tafatiraha Guud
Iyadoo xilli sii horeysay ay xukuumadda Somaliland joojisay baasaboorka Soomaaliya oo lagu samayn jiray gudaha Somaliland si aan sharci ahayn ayaa waxa hadda markale dib u bilaabmay samaynta baasaboorka loo yaqaan E-passport ee dalkaasi Soomaaliya.
Xubno uu soo magacaabay taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofil ayaa gudaha magaalada Hargeisa ka bilaabay samaynta baasaboorka Soomaaliya.
Guri ku yaala xaafadda Jig-jiga yar ayay kooxdani ka bilaabeen samaynta baasaboorada Soomaaliya oo hore xukumadda Somaliland xanibaad u saartay.
Saddex xubnood ayaa ugu muhiimsan kooxdan baasaboorada Soomaaliya ku samaynayaa gudaha magaalada Hargeisa iyadoo ay kala yihiin darajada, taliyaha xaruntan, ku -xigeenkiisa iyo agaasimaha xarunta.
Saddexdan xubnood ayaa laba kamid ahi waxay dhalasho ahaan kasoo jeedaan Somaliland halka ka saddexaadna uu yahay muwaadin u dhashay dalkaasi Soomaaliya.
Qiimaha ay ku samaynayaan baasaboorka Soomaaliya ayaa waxa uu yahay lacag dhan 300$ oo lacagta Maraykan ka ah sida uu noo xaqiijiyey mid kamida ah kooxdan oo aanu khadka taleefanka kula hadalnay.
Mishiinka lagu samaynayo baasaboorkan ayay kooxdani kala yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaasi oo uu kusoo siiyey taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliya Mr.Koofil.
Xafiiska kooxdani ay ka furteen magaalada Hargeisa waxa isaguna lug wayn ku leh mid kamida wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi kuwooda ugu muhiimsan.
Furitaanka xafiiskan ayaa kusoo beegmaysa iyado dhawaan baasaboorka dalkani Jamhuuriyadda Somaliland la ogolaaday in lagu tago dalka Imaaraadka Carabta oo xidhiidh fiican wakhtigan la leh Somaliland, iyadoo xukumadda Somaliland u xusul duuban tahay in dalal kale oo u badan khaliijka Carabtu ay ogoladaan baasaboorka Somaliland, hasa-yeeshee tani ay noqonayso dhiig bax ku timid dedaal kasta oo lagu horumarinayay baasaboorka Somalilland.
Saacadaha Soo socda waxa aan idiin soo gudbin doonaa magacyada iyo sawirada xubnahan xafiiska ka furay Hargeisa, iyadoo aanu ka maqnayn xafiisyada ay ku shaqeeyaan raggani kuwaasi oo u badan xafiisyada diyaaradaha ee ku yaala badhtamaha caasimadda.